tEST PAGE – somovies
Toos U daawo Sweden vs german
by cabdirisaq11 23rd June 2018 0
by cabdirisaq11 14th June 2018 0
by cabdirisaq11 10th June 2018 0
Madaxweynaha dalka Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa wuxuu kusoo biiray muranka ka dhashay in Karim Banzema laga reebo liiska ciyaartoyda dalkaas uga qeybgalaysa Koobka Aduunka 2018. Inkastoo uu kula guuleystay Champions League saddex sano oo xiriri ah, hadana wuxuu yahay mid ka maqan koobka aduunnka, markii uu macalin Didier Deschamps ka tegay, iyadooma Macron uu...
Lionel Messi ayaa ka sheekeeyay dhibaatada uu wajahay isaga iyo reerkiisa markii lagu heystay dacwada Canshuuraadka oo uu sheegay inay ahayd sheeko laga soo abaabulay Madrid. Xiddiga reer Argentina ayaa lagu xukumay 21 bilood oo xabis ah inkastoo sharciga Spain uu qabo in wixii labo sano ka yar isla markaana uu yahay kiiskii ugu...
Laacibka faransiiska ah ee Ousmane Dembele ayaa lala xiriirinayaa kooxda Liverpool tan iyo markii uu furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalka Prmier League-ga. Dembele ayaa xilli ciyaareed adag ku qaatay kooxda Barcelona tan iyo markii uu xagaagii hore kaga soo biiray kooxda Borussia Dortmund. Jurgen Klopp ayaa xiiseynaya laacibka garabak ka ciyaara, waxa uuna...
Macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Unai Emery ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inuu la soo saxiixdo laacibka khadka dhexe ee Sevilla Steven N’Zonzi, xagaagan. Emery kaasoo kooxda Sevilla soo hogaamiyey markaasoo horyaalka La Liga ay kooxdu keentay N’Zonzi xagaagii 2015-kii. 29-sano jirkaan ayaa la soo baxay awood xoojin ah oo uu...
Kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayaa ku dagaallami doono helitaanka difaaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt. Sida uu werrniyo Joornaalistaha laga magacaabo Nicolo Schira, kooxda Tottenham ayaa horraan laga aqbalay dalab ku kacayay €55m oo u dhiganta £48m, halka City ay la diyaar tahay ku dhawaad €60m. Qaar ka mid ah kooxaha ugu...
Waxaa la bilaawi doonaa 14 bishaa aan ku jrana waxaa lagu furi doonaa dadalka Russia vs Saudi Arabia Kobka aduunka ayaa soco doono ilaa iyo bisha janaayo dhamaadkeda
Xulalka qaranka Morocco iyo Egypt ayaa gaaray dalka Ruushka si ay kaga qeyb galaan koobka adduunka. Sidoo kale Dalka Ruushka, waxaa hore u gaaray Wadamo ay ka mid yihiin Spain, Argentina iyo Tunisia.